Antonio Conte oo tallaabo u qaadaya sidii uu xiddig horay ugu soo ciyaaray Barcelona dib ugu soo celin lahaa Serie A-da. – Gool FM
(Milan) 25 June 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa lagu soo warramayaa iney xiiso u qabto daafacii hore Barcelona sidoo kalana mar ka ciyaaray horyaalka talyaaniga Dani Alves kaas oo si xor ah looga heli karo suuqa kala iibsiga.
Sida lagu daabacay France Football, tababaraha cusub ee Inter (Antonio Conte) ayaa weydiistay kooxdiisa in loosoo iibiyo Dani Alves isagoo aaminsan inuu ku haboon yahay hanaan ciyaareedkiisa 3-5-2.
36-jirkaan ayaa xaqiijiyay inuu isaga tagayo Paris Saint Germain, wuxuuna heshiiskiisa dhamaan doonaa 30-ka June.
Wargeyska wuxuu sidoo kale baahiyay in dalabka Inter Milan uu ku farxi Dani Alves maadaama uu halkaas kasoo ciyaaray fasal ciyaareedkii 2016/2017, balse Juventus ayuu la qaatay fasal ay gaareen final-ka Champions League sidoo kalana uu kula guuleystay Scudetto.
Dhanka kale Inter waxey tartan adag kala kulmi doontaa kooxaha Borussia Dortmund, Manchester City iyo sidoo kale kooxo ka dhisan wadanka Shiinaha.